Ihe 4 mere ị ga - eji jiri Drupal dịka CMS maka saịtị gị | ECommerce ozi ọma
Ihe 4 mere ị ga - eji jiri Drupal dịka CMS maka saịtị gị
Susana Maria Urbano Mateos | | CMS na Teknụzụ, Nkuzi na akuru
Dị ka WordPress, Drupal bụkwa otu n'ime "Usoro Nchịkwa Ọdịnaya" kacha mma ma ọ bụ CMS, nke ị nwere ike iji jikwaa ọdịnaya nke weebụsaịtị gị. Ọ bụ ezie na o doro anya na WordPress nwere ibu ọrụ isi, e nwere ezi ihe mere ị ga-eji Drupal dị ka CMS maka saịtị gị.
1 1. Na-enye ndị ọrụ aka azụmahịa
2 2. Ọhụụ
3 3. Ike njikọta
4 4. Kachasị ọdịnaya
1. Na-enye ndị ọrụ aka azụmahịa
Oge dị n'etiti ịmalite dabara na atụmatụ atụmatụ. Nke a bụ uru maka azụmaahịa dịka Drupal na-agbakwunye arụmọrụ ọhụrụ ọsọ ọsọ karịa ka ị nwere ike ịtụ anya na CMS ndị ọzọ. Drupal na-enyere ndị ọchụnta ego aka imeghari ngwa ngwa na mgbanwe na ahịa na gburugburu ebe obibi n'ụzọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na uru. Tụkwasị na nke a, ime mgbanwe na-eme ka arụmọrụ dị elu rụọ ọrụ ngwa ngwa ma na-akwụ ụgwọ dị ala.
Nke a bụ ihe ọzọ nke uru nke iji Drupal kama WordPress. Drupal dị ugbu a na saịtị kachasị arụ ọrụ n'ụwa dịka Twitter, The Economist or Weather. Obu ya na-enye ya ohere ijikwa okporo uzo okporo uzo ma obu nnukwu ndi nleta.
3. Ike njikọta
O nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kachasị mma maka Drupal dịka ọ dabara n'ime usoro azụmahịa azụmaahịa n'onwe ya. Na elu ọ na-enye a ọkaibe ụzọ jikwaa ọdịnaya na dijitalụ ahịa ike. Mana o nwekwara ike ịme ihe data ahụ ma jikọta ọtụtụ ngwa na ọrụ dị iche iche, na-eme ka ọ dị mfe ịnabata n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
4. Kachasị ọdịnaya
Drupal nwere oke uru karịa ndị njikwa ọdịnaya ndị ọzọ ma ọ dịlarị Kachasị maka SEO. Gụnyere ngwaọrụ maka njikwa isiokwu na njikarịcha isiokwu, ịkọ akụkọ ọdịnaya, aha peeji, nchịkọta Google Analytics, map saịtị, na ndị ọzọ. Ọ na-ejikọkwa na nyiwe mgbasa ozi niile ma na-akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị faịlụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Ihe 4 mere ị ga - eji jiri Drupal dịka CMS maka saịtị gị
Mana m ka na-eche na WordPress ka mma n'ụzọ niile.
Zaghachi SEO Agency
Ibe weebụ dijo
Anyị ga-anwa ya iji hụ ka o si arụ ọrụ, ọ dị ka ihe na-atọ ụtọ
Instagram na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ maka Ecommerce
E-akwụkwọ SEO na Ahịa ị nwere ike ịgụ na gam akporo gị